Iji programmụ na Komodo-Dezie | Site na Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Aplicaciones, GNU / Linux, Mmemme
Komodo bụ a HERE mmemme na-akwado ọtụtụ asụsụ na ọ dị mwute ikwu na a na-akwụ ụgwọ. Mana obi oma, o nwere ihe di iche Isi Iyi, na ụfọdụ nhọrọ na-erughị (na anyi agaghi efu) akpọ Komodo-Dezie.
Na m ịnụ ọkụ n'obi na-adịghị ekpe na Mmemme weebụ, M na a na-achọ akwụkwọ ntuziaka, aghụghọ na ihe onwunwe HTML5 + CSS3 na achọrọ m ezigbo onye editọ iji tinye ihe ọmụma m na-enweta n'ọrụ. Anurum banyere BlueGriffon, ma ebe ọ bụ na enweghị m peeji nke ọrụ ahụ, enweghị m ike ibudata ya.
Otu n'ime peeji ndị m nwere ike ịbanye bụ nke Komodo-Dezie achọpụtara m na ọ tinyelarị nkwado maka HTML5. Onye ndezi a na-eji teknụzụ eme ihe site na Mozilla, ya mere enwere ike ịnabata ya na ndọtị na .xpi dị ka Firefox y Thunderbird, na ọ na-akwado ọtụtụ asụsụ dị ka m sirila gwa gị, gụnyere mmechi akpaaka maka ha.
N'ezie, ọ bụ multiplatform, dị ike nke ukwuu ma nwekwaa nke ọma na ụbọchị ndị a ọ nwetara mmelite ebe agbakwunye ọtụtụ mgbanwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Iji komodo wezie mmemme
Ọ bụ nchịkọta HTML, idezi HTML abụghị mmemme ... yabụ ihe kacha mma bụ iji IDE dịka komodo dezie, ecilpse ma ọ bụ netbeans, n'etiti ndị ọzọ
Achọrọ m IDE a maka ịdị mfe na ngwa ngwa, ọ zuru oke ma dịkwa ka
Ekwadoro m ya =)
Anwalebeghị Bluefish? Ọ bụ "onye ọchịchị" nke Gnome na ọ bụghị ihe ọjọọ.
Ọ bụ ezie na m na-alaghachi na Netbeans mgbe niile ... ma hụ na ebe ọ bụ na Oracle na-amịkọrọ ihe niile site na Sun, enwere m iwe mgbe ọ bụla m hụrụ akara ngosi ha ... mana ọ bụ nke m na-akachasị mma.
Ndi Bluefish onye nhazi HTML maka Gnome? Amaghị m, amaghị m ya. Ọ bụrụ na m ejirila ya, n'eziokwu, lee ụmụ akwụkwọ ji ya maka ịdị mfe, ọkụ na ikpo okwu.
Na OpenKomodo? Echere m na nke ahụ bụ onye ị ga-enyocha 😛
Aga m ewedata ya, kedu ihe ọ bụ?
Anyị na-ekwu maka otu ihe ahụ.
N'oge ahụ enwere ike ịnwe ọtụtụ ndị ọrụ na-eji ngwa a mana dịka Brackets na SublimeText 2 (naanị ịkpọ aha abụọ a) ọ bụ akụkọ ihe mere eme gara aga.
Site na nke a anaghị m ekwu na ọ nweghị ikike ya mana, ihe abụọ ahụ e kwuru na mbụ, ọkachasị brackets bụ onye editọ zuru oke yana "Live Preview" ka ọ bụrụ na, mgbe anyị na-efere ubu, anyị na-ahụ nsonaazụ anyị n'akụkụ ya.
Achọrọ m nke ọma ruo mgbe ike gwụrụ m mana ajụjụ a bụ na mgbe m na-eme mmemme na html anaghị m enweta ya, na mgbe m na-agba ọsọ, ihe nchọgharị ahụ mepee wee hụ ya dị ka ọ dị na netbeans, ị na-agba ọsọ na ihe nchọgharị ahụ mepee, echere m na enwere ụzọ iji hazie ya. , site ugbu a gaa n'ihu, enwere m olileanya na ị ga-enyere m aka .. ekele